नियमित सेक्स नगर्दा निम्तिने विपत्ति ! – Everest Dainik – News from Nepal
नियमित सेक्स नगर्दा निम्तिने विपत्ति !
जसरी तपाई हरेक काम दैनिक रुपमा गर्नुहुन्छ, वा नियमित गर्नुहुन्छ त्यसैगरी सेक्स पनि नियमति गर्नु पर्ने बताइएको छ । सेक्सका बारेमा खुला रुपमा छलफल गर्न त हाम्रो समाजमा बर्जित छ । तर नियमित (दैनिक) सेक्स गर्दा धेरै फाइदा हुने बताइएको छ । यदि तपाईले नियमति सेक्स गर्नुहुन्न भने तपाईलाई धेरै नोक्सान हुने एक अध्ययनले बताएको छ ।
शरीरमा नकरात्मक असर
यस्ता केही विषयमा नयाँ तथ्य सार्वजनिक भएका छन् जसमा सेक्स गर्दा शरीरमा रोगसँग लड्न वा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ्ने बताइएको छ । साथै सेक्सले धेरै प्रकारका इन्फेक्शन्स र रोगसँग लड्न पनि सहयोग गर्ने बताइएको छ । त्यसैगरी नियमित सेक्स नगर्दा शरीर कमजोर हुने बताइएको छ ।
मुटु रोगको खतरा
तपाई दैनिक रुपमा कुनै काम वा शारीरिक परिश्रम गर्नुहुन्न तर नियमित सेक्स गर्नु हुन्छ भने यसले तपाईको शरीरलाई चुस्त र दुरुस्त राख्ने मद्दत गर्छ । सेक्सले तपाईको शरीरका सबै अंगहरुलाई क्रियाशिल बनाउछ । यदि तपाई नियमित सेक्स गर्नुहुन्न भने शरीरका मासंपेसी र हर्मोन उत्पादनमा ठूलो असर गर्ने बताइएको छ ।
स्ट्रेस र तनाव कम गर्न शारीरिक सम्बन्ध रामबाण हुने बताइएको छ । वा शरीरिक सम्बन्धले मानिसलाई रिल्याक्स र मुडफ्रेस गर्न ठूलो मद्दत गर्छ । स्ट्रेसका कारण ब्लड प्रेशर बढ्नका साथै धेरै मानसिक समस्या देखा पर्ने गरेको पाइएको छ ।
केही मनोविदहरुका अनुसार दैनिक सेक्सले यौनइच्छा बलियो वा कायम रहिरहन्छ । उनीहरुका अनुसार यदि तपाईले सेक्स गर्न छोड्नु भयो भने सेक्सप्रति तपाईको रुचि दिनप्रतिदिन कम हुँदै जान्छ । र जोश पनि कम हुँदै जान्छ ।
जुन मानिसले दैनिक सेक्स गर्छन् वा शारिरीक सम्बन्ध कायम गर्छन् उनीहरुको तुलनामा नगर्ने मानिसहरुको इरेक्टाइल डिस्फक्शनको समस्या धेरै गुणा बढी हुने पाइएको छ । यस्तो खतराबाट बच्न शारीरिक सम्बन्धले ठूलो सहयोग गर्ने बताइएको छ ।